यी हुन् ‘ब्रेन बुस्टर’ खाद्यपदार्थ, बिहान नियमित खानाले मस्तिष्क बनाउँछ तेज – Annapurna Daily
On Apr 29, 2022 518
१. फ्लेवोनोइडबाट भरपूर: स्ट्रबेरी र ब्लुबेरी फ्लेवोनोइड्सबाट भरपूर हुनछ र दिमागलाई राम्रोसँग काम गर्न सहयोग गर्छ। वास्तवमा बिहान योे खाँदा दिमागलाई शक्ति प्राप्त हुन्छ। यी चिज त्यत्तिकै खान सकिन्छ या जुसको रुपमा पिउन सकिन्छ।
२. एन्टिअक्सिडेन्टबाट भरपूर: स्ट्रबेरी र ब्लुबेरी एन्थोसायनिन नामक तत्वबाट भरपूर हुन्छ। यो पनि एक खालको एन्टिअक्सिडेन्ट हो। एन्थोसायनिनले मस्तिष्कमा तनाव कम गर्छ। यसको एन्टीइन्फ्लामेटेरी गुणले कोशिकाहरुलाई सुन्निनबाट बचाउँछ।
३. फाइबरयुक्त: आन्द्रा र हाम्रो मस्तिष्कबीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। फाइबरले आन्द्रालाई स्वस्थ राख्न मद्धत गर्छ। एन्टिअक्सिडेन्टजस्तै फाइबरले सुन्निन कम गर्छ र असल ब्याक्टेरियालाई बढावा दिन्छ। यिनमा पाइने फाइबरले माइक्रोबायोम स्वास्थ्यमा सुधार गर्छ र आन्द्रा र मस्तिष्कको सुजनलाई कम गर्न मद्धत गर्छ।
यसका अलावा स्ट्रबेरी र ब्लुबेरीमा फोलेट पनि हुन्छ, जो एक महत्वपूर्ण भिटामिन हुन्छ। यसले हाम्रो मस्तिष्कभित्र रासायनिक सन्देशवाहकको रुपमा रहेको न्यूरोट्रान्समिटरलाई ठीक गर्न अनुमति दिन्छ र मूड र अब्जर्भेसनलाई नियन्त्रित गर्छ। यसैले मस्तिष्क स्वस्थ बनाउन स्ट्रबेरी र ब्लूबेरी सेवन गर्नुपर्छ।